トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Farqiga u dhexeeya aragtida ruuxiga ah iyo qasabad
Ma og tahay faraqa u dhexeeya aragtida ruuxiga ah iyo qasabad?
Labada muuqdaan in ay fahmi sababtoo ah waa mid ka mid ah in uu yahay mid aad u la mid ah. Ha kooban halkan ee aynnu.
waa aragti ruuxiga
Waa maxay aragtida ruuxiga ah. Marar badan on this site sidoo kale qeexayaa, laakiin riyada ku eegay xagga ruuxa ka tarjumaysaa image ee ay maankayga, waa technology in arkaysid dunida in aan la arki karin. Sidaas darteed, wuxuu helayaa fariin ka ruuxa mas'uulka, kuu sheegi kara Su'aasha ah.
jinni The mas'uulka, kuwa qof kasta, waa ay joogaan in ay ilaaliyaan nafta dadkeeda. Waa joogitaanka in soo saari doontaa digniin ah marka aad isku dayayaan Susumo dhinaca qaldan, laakiin waxaa jira waxyi jirin oo noo derjada dadka caadiga ah ma awoodi doonaan in ay helaan fariinta. The ii sheeg aad u hesho meel waa aragti ruuxiga ah, waa derjada ah. aragti ruuxiga ah
, taas oo ku xidhan ee Milanello iyo waafaqid ee qofka la tashanaya derjada, waxaa jira sinnayn (kala duwan shaqsi) ee video ah in la soo bandhigay, waxa uu ahaa in ay jiraan laga yaabaa in aanay muuqan on cad u.
waafaqid waa wanaagsan tahay, laakiin waxaa ku jira ka mid ah waxaa laga yaabaa in derjada ah awood, sidaas darteed haddii kale ku soo dego off, waayo, haddii xaalad degdeg ahi, in dareen, sida dhaqtarada qoyska, jinni oo waafaqsan wanaagsan Waxa kale oo fiicnaan lahayd in ay sii si aad u hesho awood u leh inay qofka.
indhaha qofka soo muuqday hore waa, "aan karin inay nafta mataanaha Ma", "Ma waxaad u jeedaa, qofkani waa saaxiibkiisa nafta?" laga bilaabo wakhtiga aan ku fikiray sida, lahaa in ay waafaqsan wanaagsan la derjada in uu seegi doono fursad.
Dhinaca kale, iyada oo si ay u dhigma inta jeer ee raadiyaha, qaadashada xiriir ah dunida aan u muuqdaan in ay u dhigma Milanello qofka iyo tamarta, la ruxruxo, waa technology isgaarsiinta a.
ka hor in ay qaataan xiriir ah, tusaale ahaan, waa Self Sare (naftaada-cabbir sare).
tani waxaa la hadlayay naftaada-cabbir sare, laakiin wuxuu noqon doonaa matalaad adag, waxaan u maleynayaa in ay fududahay in la fahmo, haddii ay suurogal tahay in gaaban loo arkaa in uu midab fiican waqti.
qaar ka mid ah sabab shuqulkiinna iyo jacaylka, Anigu garan maayo sidoo kale waa soo baxa qaab ciyaareed sarre uu doonayay gobolka, iyaga u gaar ah marka aad u gelaysaan waxa wareegga fala, sida fiican xitaa samaynaya, waa isku sare.
Higher Self la warsan yahay in dago dadka, waxaad ka heli noocaas ah fariin ama calaamadee ka waqti adiga kuu gaar ah waa midab wanaagsan halkaas helaan.
sokow, adiga ama sidoo kale loo yaqaan qasabad helaan record Akashic ah. record
Akashic iyo waa, macluumaad iyo dareenka dhammaan noocyada tan iyo bilowgii ah noolaha koonkan, xusuusta iyo waxa uu ahaa meel ah oo uu soo duubay (ma aha meel jirka ee dhabta ah), sida maktabadda daruur internetka on ka fiirsaneysa uu la wareegay noqon lahaa fududahay in image.
jiri helaan, nolosha ee la soo dhaafay iyo nafta nin in ay ka walwalsan tahay, shaqada, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan macluumaad kala duwan, sida qaddar ahaan doonaa.
oo naga mid ah u sheegay in ay soo bixi macluumaadka loo baahan yahay idinka yeelay record Akashic ah iyada channelers doonista iyo psychics.
Waa in la ogaadaa in, tan iyo qoondaynta shaqada waa mid aad caddayn, xitaa haddii ay daruuri ma aha sheegtay channeler ah, la-taliyaha iyo psychics ruuxi ah, waxaad laga yaabaa in lagu qasabad dadka sheeganaya ah maal-lagala baxo. _
Waa in la ogaadaa in, tan iyo qoondaynta shaqada waa mid aad caddayn, xitaa haddii ay daruuri ma aha sheegtay channeler ah, la-taliyaha iyo psychics ruuxi ah, waxaad laga yaabaa in lagu qasabad dadka sheeganaya ah maal-lagala baxo. 0D_ Higher Self la warsan yahay in dago dadka, waxaad ka heli noocaas ah fariin ama calaamadee ka waqti adiga kuu gaar ah waa midab wanaagsan halkaas helaan.
Waa in la ogaadaa in, tan iyo qoondaynta shaqada waa mid aad caddayn, xitaa haddii ay daruuri ma aha sheegtay channeler ah, la-taliyaha iyo psychics ruuxi ah, waxaad laga yaabaa in lagu qasabad dadka sheeganaya ah maal-lagala baxo. 00D_
Waa in la ogaadaa in, tan iyo qoondaynta shaqada waa mid aad caddayn, xitaa haddii ay daruuri ma aha sheegtay channeler ah, la-taliyaha iyo psychics ruuxi ah, waxaad laga yaabaa in lagu qasabad dadka sheeganaya ah maal-lagala baxo.